Hay’adda Human Rights Watch Oo War Ka Soo Saartay Xaaladda Ka Aloosan Gobolka Tigreega Ee Itoobiya – Borama News Network
“Iyada oo laga jawaabaya dhacdooyinka ka socda gobolka Tigreega ee Itoobiya, oo ay ka mid yihiin carqaladeynta dowladda federaalka ee shabakadaha isgaarsiinta ee gobolka”, Mausi Segun, oo ah agaasimaha Afrika ee Human Rights Watch, ayaa sidaasi yiri:
Guud ahaan dadka reer Itoobiya waxay sanadkii ugu dambeeyay la kulmeen rabshado maalinle ah iyo tacadiyo . Ilaa haatan ma jirto ficilo lagu xaliyo dhibaatooyinka aan daaha laga qaadin ee ka dhex aloosan Itoobiya, maamulka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyaduna waa inay xaaladda amni ee soo ifbaxaya si deggan uga jawaabaan iyadoo la ilaalinayo xuquuqda dhammaan dadka Itoobiyaanka ah.
Waxaan saaxibada Itoobiya caalamka ee Itoobiya oo ilaa haatan aamusan ugu baaqeynaa iney gudbiyaan darriintan.
Xaddidaadda qadka isgaarsiinta ee gobolka Tigreega ayaa sidoo kale xaddidaya soo tebinta warbixinnada halista ah ee ku saabsan dhibaatooyinka ay shacabka kala kulmi karaan tallaabada military ee dowaddu ku dhawaaqday.
Mar sii horreeysay ayuu Rai’sul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed amar ku siiyay militariga dalkiisa in ay gutaan waajibadkooda ah in dalka iyo dadka la badbaadiyo, islamarkana ay tallaabo ka qaadaan gobolka Tigrayga oo ku eedeeyay inay dagaal bilaabeen.
Rai’sul wasaaraha ayaa xisbiga TPLF ku eedeeyay inay weerareen saldhig militari oo ku yaalla gobolka.
TPLF ayaa horey waxay ugu eedeeyeen maamulka Abiy in uu marmarsiiyo ka dhiganayo feyriska Corona si uu awoodda u sii hayo maadama waqtigiisu ku ekaa bisha October.
Dowladda dhexe ayaa dhankeeda ku eedeeysay gooni TPLF inay ka dambeeyeen qulqulutooyinka ka dhacay meelo dalka ka mid ah.
Sida ay sheegtay shirkadda la socodka xorriyadda internet-ka ee Netblocks- waxaa gobolka Tigrayga ka go’an maanta internetka iyo khadka talefoonada.
Bayaanka uu soo saaray rai’sul wasaaraha ayaa waxaa uu ku yiri “in khadka cas laga tallaabay” islamarkana si dadka iyo dalak loo badbaadiyo uu khiyaarka ugu dambeeyo noqday in awood loo adeeegsado,” TPLF.
Horraantii toddobaadkan gudoomiyaha TPLF Debretsion Gebremichael ayaa ku eedeeyay maamulka rai’sul wasaare Abiy in ay kala shaqeynayaan dowladda dalka Eritrea si loo diyaariyo weerar gobolka lagu soo qaado.
Xisbiga TPLF ayay awoodda dalka itobiya gacanta ugu jirtay ku dhawaad 30 sano markaasi oo uu ak dib Abiy uu xukunka kala wareegay 2018.
TPLF ayaa waxay ka baxeen xisbiga talada hay aka dib markii ay diideen inay ku biiraan xisbiga Barwaaqo.
Balse TPLF ayaa waxay wali ka taliyaan gobolka Tigrayga.
Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli muddo bilooyiin ah ay sii kordhaysay xiisadda u dhaxeysa dowladda dhexe iyo maamulka gobolka Tigreega.
Waxay sidoo kale arrintani ay ku soo beegmaysaa xilli maalintii shalay ahayd 32 qof oo amxaaro ah lagu dilay gobolka Oromiya.
Hadda halkee xaaladahan ka soo cusboonaaday itoobiya ay ku dambeyn karaan, Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo ka faalooda arrimaha dalka Itoobiya.ka Oromiya.
Kooxaha Maansooniyada Oo Dhexda Ka Maran Doorashada Dalka Maraykanka
Madaxwayne Qoor Qoor Oo Wax Laga Waydiiyay Heshiiskii Ahlu Suna Iyo Jawaabta Uu Ka Bixiyay
Bnnstaff Bnnstaff September 15, 2020
Siyaasiyiin Loo Haysto Lacag La Sheegay In Ay Ka Musuqeen Aaskii Mandela
Dowladdaha Turkiga Iyo Sacuudiga Oo Wadahadal Muhiim Ah Yeelana Iyo Ariamaha Ay Ka Wada Hadlayaan
Bnnstaff Bnnstaff May 8, 2021